Wholesale iPhone 12 dzakateedzana 2.5D zvakavanzika zvinodzora girazi screen mudziviriri Mugadziri uye Mutengesi | OTAO
Wese munhu akawana chiitiko ichi. Patinenge tichishandisa nharembozha kubhadhara, tinotya kuti vamwe vanozoona password kana kuongorora kodhi yako yeQR kuti vabe mari yako. Pane njanji inomhanya-mhanya, yepasi pevhu, kana mulifiti, kuvhura magwaro ebhizinesi kunotyawo kubatwa.
Kuti tidzivirire vamwe kuti vasaone zvirimo mufoni yedu. OTAO yakavandudzwa yakavanzika girazi screen mudziviriri muna 2014 iyo inonzi zvakare anti-spy kana anti-peep tempered girazi screen mudziviriri ..
Nheyo yekuvanzika firimu
Iyo yekuvanzika firimu inowedzera yakavanzika firita mune yakajairwa firimu, nekushandisa iyo Micro-louver Optical tekinoroji, chengetedza iyo kona yechiedza, saka kona yekuona yefoni mbozhanhare yakadzikira. Neiyi nzira, vamwe vanofanirwa kunge vari pakona yakatwasuka seyako kuti uone zvirimo pachiratidziro chefoni, uye avo vari kunze kwenzvimbo inoonekwa chete vanogona kuona dema screen.
Iwe unofanirwa kudzivirira Fake Yakavanzika Firimu
Iko zvakare kune yekunyepedzera firimu yekuvanzika pamusika iyo inoshandisa polarized zvinhu pachinzvimbo cheMicro-louver maziso zvinhu. So izvo unogona’t ona iyo skrini zvakajeka kubva kumberi divi,nekuti inovhara yakawanda yechiedza kubva kune chero ngirozi.
OTAO PRIVACY Girazi ZVAKANAKA
Iye zvino musika uzere nemafashama emhando dzakasiyana anopesana-peep akadzikama mafirimu, tingasarudza sei firimu remhando yepamusoro?
Unogona kuenzanisa kubva tnhamo zvinhu:
● Kuvanzika angle ；
● Kufambisa ；
Iyo anti-peeping athari inoenderana nekona yekuona. Izvo zvidiki kona yekuona, zvirinani iyo anti-peeping athari. Iyo unilateral yekuona kona yeiyo yekare anti-peep firimu ndeye 30 ° -45 °, uye iyo anti-peep mhedzisiro iri murombo, nepo OTAO iPhone anti-peep firimu ine kona yekuona ye28 °, iyo inogona kuchengetedza zvakavanzika zvega. zvirinani.
Isu inodawo kutsanangura pano. Kune mazita akasiyana emafirimu epachivande mumusika, mamwe anonzi 180 ° mafirimu epachivande (anonziwo2 nzira zvakavanzika mafirimu, ayo anogona kudzivirira vanhu kuruboshwe uye kurudyi kuti vatarise mafoni avo), 360 ° kuvanzika firimu (inonziwo 4 nzira yekuvanzika firimu, kureva kuti, vanhu vanogona kutarisa kupinda kwavo parunhare zvakavanzika kubva pamakona mana, kumusoro, pasi, kuruboshwe, uye kurudyi). Saka 180 ° uye 360 ​​° ndizvo zvakasiyana nepfungwa yekuti kuvanzika angle.
Kana zviri zvekufambisa kwechiedza, zvinokanganisa iko kunyaradzwa kwekuona iyo skrini, saka izvi zvakare zvakakosha.
Kuti isapedze mari, mafekitori mazhinji anoshandisa yakaderera anti-peeping zvinhu, kwete chete iyo anti-peeping angle yakakura kwazvo, asi iyo light transmittance zvakare yakadzika kwazvo, pamwe chete 40% -50%, uye vashandisi vanonzwa kusagadzikana mushure kutarisa chidzitiro kwemaminetsi mashoma.
OTAO yekuvanzika firimu inoshandisa chizvarwa chitsva cheOCA optical adhesive substrate yekuchengetedza iyo skrini yakajeka uye yakajeka, uye iyo light transmittance inogona kusvika inopfuura 60%. Iyo inogona zvakare kunyatso kudzivirira kudzvokora uye kukuita kuti uwedzere kugadzikana kana uchishandisa nharembozha yako.
Zvadaro: 360 Yakazara Kudzivirirwa Kwemuviri Combo ye iPhone 12
● Runhare 12 Mini ；
iPhone 12 dzakatevedzana 2.5D yakazara pabutiro yakatsamwa girazi ...
iPad Pro 11 ″ 2020 Wakatsetseka Girazi Screen P ...
Samsung S21 2.5D Full Cover Wakatsetseka Glass Scre ...
Samsung S21 2.5D Full guruu Wakatsamwa Glass Scree ...
Samsung S21 Plus 2.5D Full Cover Wakatsetseka Glass ...